Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay warbixintii Qaramada Midoobeey - BBC News Somali
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay warbixintii Qaramada Midoobeey
Lahaanshaha sawirka Getty Images/NurPhoto
Warbixin ay gudbiyeen khubaro ka tirsan Qaramada Midoobeey oo baaritaan ku sameeyay cunna-qabateynta hubka ayaa sheegay "in marar kala duwan la jebiyay cunaqabateynta", uuna Soomaaliya "galo hub sharci darro ah".
"Ciidamada waxay la dagaallamayaa cadow, shacabka iyo dowladda halis ku ah", ayuu yiri Cabdisiciid.
"Waxay ahayd in cunna qabateynta la qaado maalinkii 600 oo qof oo Soomaali ah la laayay, 14-kii October 2017-kii… Soomaaliya waad aragtaa looma arko in dhibkaas sidaa u xajmiga wayn in uu yahay dhib u baahan in laga hortago".
Kooxda khubarada ee Qaramada Midoobay waxaa kale oo ay dabagaleen qaar ka mid ah hub lahaa sumadda dowladda oo ay la soo degtay Sabtemabr, 2014-kii, Juun 2017-ka iyo July 2017-kii.
Illaa 93 ka mid ah bastooladaha ay la soo degtay dowladda federaalka ayaa waxaa ka muuqatay cadeymo muujinaya in la isku dayay in laga fujiyo sumadda dowladda, tallaabadaas oo ah middii ugu horeesay ee ay arkaan khubarada.
La taliyaha Madaxweyne Farmaajo ee arrimaha amniga wuxuu yiri: "Anaga waxaan rabnaa in ciidankeena Soomaalida ee dhimanaya maalin kasta ee cadowga la dagaallamaya, in ay qalabeysan yihiin, ayna wataan baabuurta loo garanayo ABC ee gaashaaman ee ay isaga difaaci karaan qaraxyada gacan ku sameyska ah ee nimankaas ku dagaallamaan".
Wuxuu intaa ku daray: "Ma jiro hub dowladda usoo dega oo aan la calaamadeyn oo aan la diiwaan gelin, marka la bixinayana aan lagu qorin askeriga qaadanayo hubkaas. Taas oo ah nidhaam micnihiisu yahay; waxyaabihii farsamada ahaa ee naloo sheegayay ee nala dhahayay cuna qabateynta way idiin saran tahay, waan dhameynay".
Cadeymo ay khubarada ka heleen saddex qof oo ka ganacsada hubka waxaa ay xaqiijiyeen in hubka dowladda ay " iibsadaan saraakiil sare iyo kuwa xilal hoose ka haya ciidanka dowladda".
La taliyaha madaxweyne Farmaajo ayaa yiri: "Dowladdaan seddax sano ayey joogtaa, markii hore waxaa naloo sheegay in cuna qabateynta qeyb ahaan la qaaday 2014-kii (xilligii dowladda Xasan Sheekh), taas oo macneheedu ahaa in hubka qaar aan la soo degi karno, gaar ahaan hubka fudud. Ka dib waxaa naloo sheegay in haddii hubku uu galo gacmaha dad aan dowladda ahayn, marka taas in la xaqiijiyo".
"Marka taas waan baarnay. Sidaad ogtahay ciidamada waxaa loo diiwaangeliyay si casri ah, akoonkooda waa la yaqaanaa, qoriga ay sitaan waa la calaamadeeyay waana la diiwaan geliyay", ayuu hadalka ku sii daray Cabdisiciid Muuse Cali.
Cabdisiciid Muuse Cali ayaa yiri: "Anaga waxaa naloo sheegay in cunna qabateynta ay saran tahay nimankan Al-Shabaab iyo dadkaan xagjirka ah. (Cunna qabateynta) ma saarna dowladda; warar noocaas ah baa naloo sheegaa".
"Nimankaan sharci darrada ah uma baahna in dowlado ay la xiriiraan oo hub ay ka gataan. Cidda la rabo in ay hub keensato oo ciidamadeeda qalabeysato ama hubeyso waa dowladda sharciga ah".
Balse, kooxda khubarada Qaramada Midoobay waxay diwaangeliyeen hub ay Al Shabaab kala wareegtay dowladda, hubkaas oo ay ka mid yihiin qoryo, rasaas, baabuur iyo basuukayaal iyo baaburta gaashaaman ee Dowladda.
Al Shabaab ayay sidoo kale Qaramada Midoobay sheegtay in ay gacanta ku dhigtay baabuur milatreri, lidka diyaaradaha iyo rasaas fara badan mudo laba asbuuc gudahood oo ay weerar ku qaadeen saldhigyada Dowladda ee El Salini, Shabeelaha hoose, Moqokori ee gobolka Hiiraan, dagaaladaas oo ay Qamara Midoobay shegtay in ay dhaceen 22 Sabtemabr ee sanadkan 2019 iyo1-da Juun ee 2018.
Balse La taliyaha madaxweynaha ee dhanka Amniga ayaa beeniyay arrimahaas, wuxuuna ku adkeystay "uusan jirin hub dowladeed oo Al-shabaab gacanta u galay".
La taliyaha madaxweyne Farmaajo ee dhanka Amniga, Cabdisiciid Muuse Cali wuxuu yiri: "Siyaasaddu waxay tahay, dowladaha na taageera waxay badankooda nagu taageersan yihiin la dagaallanka Al-Shabaab iyo in ay rabaan in dowlad Soomaaliyeed ay soo noqoto. Tiina waxay tahay in dowladda ay waajibaadkeeda ay gudaneyso."
"Puntland": Warbixinta waxaa lagu xusay in "Puntland ay weli tahay meesha uu Soomaaliya ka soo galo hubka sharci darrada ah".
"Hubkan sida caadiga ah waxaa lagu soo qaadaa doomo yaryar oo ka yimaada yaman." 4-tii bishii March ee 2019, doomo hub iyo rasaas siday ayaa gaaray xeebaha Puntland ee u dhexeeya Boosaaso iyo Qandala", ayey tiri warbixinta.
Khubarada Qaramada midoobeey ee qaabilsan cunna-qabateynta hubka waxay sheegeen in ay "sii wadayaan baaritaanka ku saabsan xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya dullaaliinta hubka ee Puntland iyo kuwa ka soo iibiya ee Yaman ku sugan".
Mas'uuliyiinta waxaa kale oo ay shegeen in aysan ahayn ku tala gal ah in ku xadgudbaan cunaqabateynta hubka, balse Somaliland iyo Puntland ay u arkaan "dalal madaxbanaan".
Iiraan oo lagu tilmaamay halka la mariyo dhuxusha Soomaaliya
Lahaanshaha sawirka Getty/AFP
Warbixinnadii 2017 iyo 2018 ee Kooxda lasocodka xayiraadda hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea, waxaa lagu sheegay: "dhismaha saldhigga militari ee Imaaraatka uu ka dhisanayo berbera in uu carqalad ku yahay cuna-qabateynta hubka".
Guddiga khubarada ah "wuxuu ogaaday in Dalka Isutagga Imaaraatka Carabta uu si joogto ah u diiday in uu jawaab wax ku ool ah ka bixiyo su'aalihii Korjoogtada Qaramada Midoobey ay ku dalbadeen macluumaadka dhabta ah ee qalabka la geeyay iyo qandaraaska maamulka saldhigga".
Guddiga oo sheegay in ay booqdeen Somaliland, bishii February ee 2019, waxay tilmaameen in "la diiday dalalbkoodii ahaa in saldhigga ay tagaan".